लकडाउनमा खाद्यान्न किन्न निस्कन्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफः पाइन्छ
काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले मंगलबार विहानदेखि लकडाउन गरेको छ । तर, लकडाउनबारे नेपालीलाई राम्रोसँग थाहा नभएकाले हुनुपर्छ, अनेक जिज्ञासा पनि जन्मिइरहेका छन् ।
त्यही भएर हुनुपर्छ, मंगलबार दिनभर मानिसहरुले सामाजिक सन्जालमा यसरबारे अनेक प्रश्नहरु राखे ।
यस्तै प्रश्न राखेकी थिइन्, सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ता अमृता लम्सालले पनि । उनले ट्विटरमा लेखिन्, ‘मैले अझै बुझेकी छैन, यो लकडाउनमा दैनिक खाद्यान्न जरुरत परेको कुरा किन्न घरबाट निस्कन पाउने किन नपाउने ? कसैले भनिदिन सक्छ ?’
लम्साललाई यसबारे अरुले पनि जवाफ दिएका छन् ।
सँगसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि उनलाई जवाफ फर्काएका छन् । ज्ञवालीले एक शब्दमा लम्साललाई जवाफ दिएका छन्– पाइन्छ ।